Saturday October 16, 2021 - 14:29:36
Xilli wali ay dagaallo culus ka socdaan dalka Itoobiya ayay dowladda Ingiriiska soo saartay digniin culus oo muwaadiniinteeda ay uga mamnuucayso in ay usafraan intabadan gobollada uu wadankaasi ka koobanyahay.
xafiiska arrimaha dibadda ee Commonwealth-ka ayaa sheegay in muwaadiniintiisa uu ka mamnuucay in ay safar u aadaan dhammaan degmooyinka iyo deegaannada gobolka Tigreey halkaas oo la sheegay in ay ka jirto halis dhanka amniga ah oo aad usarrayso.
sidoo kale dowladda Ingiriiska ayaa muuwaadiniinteeda ka reebtay in ay usafraan ismaamullada cafarta iyo amxaarada waxaana la sheegay in gobolladan ay ka socdaan dagaallo culus islamarkaana uusan ka jirin ammaan laysku hallayn karo.
UK waxay si gaar ah usheegtay in ay lasoo baxayso shaqaalihii ka jogay magaalooyinka wello,Gonder,desis iyo abyanaat, sidoo kale Ingiriiska ayaa dadkiisa ka mamnuucay in ay usafraan magaalooyinka dhulka somaligalbeed ee ixtilaalka kujira sida afdheer,qabridarrahe,afdheer iyo Wardheer.
dagaalka sokeeye ee ka holcaya gobollada Itoobiya ayaa sababay in ay dalka isaga firxadaan dadkii ajaanibta ahaa ee maalgashiga ku sameyn jiray dhaqaalaha wadankan dhaca geeska qaaradda afrika.